တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ရူးနေတော့လဲ ခက်သားလား ...
Posted by မေဓာဝီ at 7:11 AM
အင်း အားကျစရာပဲနော်... အရူးဘ၀ကလည်း... သူပြောချင်ရာကိုပြောနိုင်တယ်...
Phone sat lite ya ma lar......:D
11/07/2006 12:16 PM
ဘယ်ကိုလဲ ဗဟန်းရဲစခန်းကိုလားဟင် :P
ရူးတဲ့သူတွေ ပြောတာပဲ ခံနေရတာ ဟုတ်ဘူးလား။ ဟီး..
haha.. i laughed as i think of it in other implied sarcastic meaning... lol!!
အင်း.. ဗဟန်းမှာ နေတယ်ဆိုတာ ပေါ်သွားပြန်ပီ.. အစိမ်းရောင် အရူးတွေ ရောက်လာမှ ဟိုအရူးထက်ဆိုးနေမယ်.. ;P
11/07/2006 11:39 PM
အရှူးအော်တဲ့ ဟိုတခွန်းကို ကြိုက်တယ် မမေ
စားလို့ရတာ အကုန်စား....... ^_^
some time .. it is good to be quiet... if some one is not listening and doing what he wants...... Beingamad mad, he could have done every thing he want to say or do...
Other wise ... he could have hurt you...
Becareful of those guys...
11/08/2006 3:52 AM
yes, Ma May.
Your words are deadly right!
11/08/2006 5:04 AM
11/08/2006 6:01 AM
ပြီးတော့ ဘ၀င်မြင့်ပြီး ကိုယ်ကလွဲရင် ကျန်သူတွေအားလုံး အသုံးမကျတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်ပဲအကောင်းလို့ထင်နေတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်လုပ်ရင်အမှန် သူများလုပ်ရင်အမှား၊ ကိုယ်ပြောရင်စကား သူများပြောရင် ဝေဖန်တာ၊ ကဲ့ရဲ့တာ လိုက်ပြိုင်တာ ဒါတွေလဲ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ အရူးတွေပါပဲ.... အရူးဆိုတော့လဲ ဘာပြောပြောဘာလုပ်လုပ် ခွင့်လွှတ်ထားရတယ်မဟုတ်လား (အောင့်သက်သက်နဲ့ပေါ့)